သူရဲကောင်းဆိုတာ တစ်ဖက်သားလူတစ်ယောက်ကို စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာကော ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာ ကိုပါ အနှောင့်အယှက်ဖြစ်အောင် ထိခိုက်နစ်နာအောင် ဘယ်တော့မှ မလုပ်ဖူး.. အမြင်မတော်တာရှိရင်လည်း စေတနာသန့်သန့်နဲ့ ပြောဆိုဆုံးမတယ်.. ဝေဖန်အကြံပေးတယ်. အဲ့ဒီအတွက်မျှော်လင့်ချက်တစ်စုံတစ်ရာဆိုတာ သူတို့ရဲ့စိတ်ထဲမှာ စိုးစဉ်မျှမရှိဘူး.. လိုက်နာ၏ မနာ၏ဆိုတာ တစ်ဖက်သားရဲ့စိတ်ပေါ်မှာပဲမူတည်တယ်။
သူရဲကောင်းဆိုတာ လူတစ်ဖက်သားကို သတ်စေတဲ့ တဖက်သတ်အပြောအဆိုမျိုး လုံးဝမပြောဆိုမိအောင် သတိတရားတွေနဲ့ ရှောင်ကျဉ်တယ် ...
သူရဲကောင်းဆိုတာ သူတစ်ဖက်သားရဲ့ အကျိုးစီးပွါးကို ပျက်စီးဆုံးရှုံးစေလိုတဲ့ဆန္ဒ သူတို့မှာ မရှိဘူး.. သူများအောင်မြင်နေတာကိုမြင်ရင်ပဲ သူတို့ရဲ့ရင်ထဲမှာ ထပ်တူဝမ်းသာ ပီတိ ဖြစ်မိတာပဲရှိတယ်။
သူရဲကောင်းဆိုတာ သူတို့ရဲ့စိတ်ထဲမှာ ဘယ်တော့မှ အမှောင်ဖုံးနေတယ်ဆိုတာ မရှိဘူး.. ဟန်ဆောင်မှုမရှိဘူး၊ အတ္တ မရှိဘူး၊ မာနမရှိဘူး..အတုအယောင် ဆိုတာ သူတို့ရဲ့နှလုံးသား ထဲမှာ လုံးဝမရှိ သလို ရိုးသားမှုကိုပဲ ထာဝရလက်ကိုင် ထားသူဖြစ်တယ်။
သူရဲကောင်းဆိုတာ အမှောင်ထဲမှာ လူအများထင်ယောင်ထင်မှားဖြစ်အောင် ဘယ်တော့မှ မနေဘူး... စိတ်ကွယ်ရာအရပ်မှလည်း သူတစ်ပါးကို ကာယကံ၊ ၀စီကံ၊ မနောကံဆိုတဲ့ ကံသုံးပါနဲ့ ဘယ်တော့မှ မပြစ်မှား မကျူးလွန်ဘူး... အသိုင်းအ၀ိုင်း လူအများရဲ့အလယ်မှာ ရိုးသားပွင့်လင်းစွာနဲ့ နှီးနှောဖလှယ်တယ်.. တွေဝေငေးငိုင်နေခြင်းမရှိသလို သူတို့ရဲ့ဟန်ပန် အမူအရာတွေကလည်း ရိုးရှင်းတယ်..
သူရဲကောင်းဆိုတာ သူတို့ရဲ့စိတ်က အစဉ်ကြည်လင်ပြတ်သားနေသလို ဘေးပယောဂ ကြောင့်လည်း ဆေးစက် အစွန်းထင်းမခံဘူး... သူတို့နှလုံးသား လေးကိုလည်း အမြဲဖြူစင် နေအောင်ထားတယ်။
သူရဲကောင်းဆိုတာ လူတစ်ဖက်သားအပေါ် မကျေနပ်ချက်တွေ ရှိခဲ့ရင်လည်း ရင်ထဲမှာ ဘယ်တော့မှ အညှိုးအတေးမထားဘူး.. ပွင့်ပွင့်လင်းလင်းတိုင်ပင်ဆွေးနွေးတယ်.. တရားသောနည်းလမ်းနဲ့ အနိုင်ယူတယ်.. မမြင်ကွယ်ရာကနေအနိုင်ယူတက်တဲ့ လူပိန်းတွေရဲ့ လုပ်ရပ်နဲ့ ဘယ်တော့မှ လက်တုန့်မပြန်ဘူး။
သူရဲကောင်းဆိုတာ အရာရာကိုသည်းခံခွင့်လွှတ်နိုင်စွမ်းအပြည့်ရှိတဲ့ ခန္ဒီပါရမီနဲ့ ပြည့်စုံတယ်... လူမျိုး၊ ဘာသာ၊ သာသနာကို တခြားရေခြားမြေခြားတွေရဲ့အလယ်မှာ အရောင်မှေးမှိန်သွား စေတဲ့ အပြုအမူမျိုး ဘယ်တော့မှမပြုလုပ်ဘူး။
သူရဲကောင်းဆိုတာ ပြဿနာတစ်ခုခုနဲ့ရင်ဆိုင်လာရတိုင်း ခေါင်းအေးအေးထားပြီး စဉ်းစား တယ်.. ဦးနှောက်ကြီးကြီးသုံးပြီး ဆုံးဖြတ်တယ်.. ပြဿနာကိုလည်း အေးချမ်းစွာနဲ့ အဆုံးသက် စေချင်တဲ့ စိတ်ဆန္ဒတွေပဲရှိတယ်။
မှတ်ချက်။ ။တွေးပြီးရေးကြည့်တာပါ ...စဉ်းစားမိတာ.. (သူရဲကောင်းဆိုတာ) နေရာမှာ (သူတော်ကောင်းဆိုတာ) ကို အစားထိုးပြီး ဖတ်ကြည့်တော့ စာသားတာမတူတာ အဓိပ္ပါယ်သဘော တရားကတော့အတူတူပါပဲ...
လောကကြီးမှာ အနန္တသတ္တ၀ါတွေထဲကမှ အသိဥာဏ်မြင့်မားတဲ့ လူသားတိုင်း သူရဲကောင်းတွေရဲ့ စိတ်ဓါတ်မျိုးနဲ့ လောကကြီးကို ထာစဉ် အလှဆင်နိုင်ကြပါစေ...။
လေပြေချို 8:22 PM
Posted by လေပြေချို at 7:10 AM
Labels: သုတ၊ ရသစာစုများနှင့် ဖတ်မိသမျှ စာတိုပေစကလေးများ
စံပယ်ချို November 2, 2012 at 1:15 PM
လွင်ပြင်လှိုင်းငယ် November 2, 2012 at 8:21 PM
ညီလင်းနိူင် November 2, 2012 at 9:30 PM
အတွေးကောင်းလေးကို မျှဝေခံစားခဲ့ပါတယ်ဗျာ ။
ဆက်လက်ထုဆစ်နိူင်ပါစေ လေပြေရေ .....
မိုးနတ်ကြယ်စင် November 3, 2012 at 7:35 AM
မြတ်နိုးသူ November 4, 2012 at 12:51 AM
ရိုးမြေကျ November 4, 2012 at 10:04 PM
စာပေ၊ ရသအထွေထွေကို လေ့လာမှတ်သား စုဆောင်းရင်း ကျမချစ်သော ကဗျာလေးများကို ခံစားရေးဖွဲ့လို့ တရားမျှတသော လောကကြီးကို ဖြူစင်သော မေတ္တာပန်းလေးများဖြင့် ထာဝရ အလှဆင်ပေးချင်သူပါရှင်။ laypyaycho77@gmail.com
စာရေးခြင်း၊ စာဖတ်ခြင်းကို ခုံမင်နှစ်သက်သူ ကျမအတွက်တော့ သည်ဘလော့အိမ်လေးက ပျော်စရာကမ္ဘာငယ်လေးတစ်ခုလိုပါပဲ....။ laypyaycho77@gmail.com
*ရေးခဲ့ပြီးသော မှတ်တမ်းများ* July (1) June (1) April (3) March (2) February (2) January (4) December (2) November (6) October (5) September (8) August (9) July (12) June (6) May (11) April (27) March (20) February (13) January (33) December (38)
ရင်ထဲက ကဗျာ (၁)
နွေးထွေးတဲ့ ရင်ခွင်ထက် ဆောင်းအအေးဒဏ်လည်း ပြင်းထန်ပါစေ.... စိမ်းလန်းတဲ့ သစ်ရိပ်အောက် နေမင်းလည်း ပူပြင်းပါစေ.... ရေမှုန်လေးတွေ လေမှာဝဲ သည်မို...
မထင်မှတ်ထားတဲ့တစ်နေ့မှာပေါ့ သူမနဲ့ကျမ ရေစက်စုံဖို့ အကြောင်းဖန်လာတယ်… သူမကိုကျမတစ်ခါမှ မမြင်ဖူးခဲ့ပါဘူး ဒါပေမယ့် သူမကိုအရမ်းရင်းနှီး...
အချစ်က ငါ့အတွက် အလင်းရောင်လား? တည်ငြိမ်တဲ့ အလင်းလား? ဒါမှမဟုတ် မှုန်ဝါးဝါး ဟိုးအဝေးက အလင်းရောင်မှိန်မှိန် မီးအိမ်လေးလား? သေချာတာက ဟောင်းနွမ်...
ရင်ထဲက ကဗျာ (၂)
မွန်မြတ်တဲ့ ချစ်ခြင်းတွေနဲ့ သစ္စာမှန်တဲ့ နှလုံးသားလေး အမြဲပင် အပ်နှင်းလို့ ကမ္ဘာဆယ်သက် တစ်သက်မကွာ မောင့် အပါးမှာ ထာဝရနေခွင့်ရချင်သည်.......
မွေးဖွားခဲ့ကြတယ် နုပျိုမှုတွေနဲ့ ဇရာကိုအန်တု သေခြင်းဆီသို့ ဦးတည်ကြတယ်… အစွန်းနှစ်ဖက်ရဲ့ကြား ဘာတွေများရခဲ့လဲ သောကတွေနဲ့ မျက်ရည်ဝေ...
တမ်းတမိခြင်းများ (အမေများနေ့ အမှတ်တရ ၂၆.၁.၂၀၁၃)
ဘယ်လောက်ကြီးပဲ တန်ဘိုးကြီးတဲ့ ကာလာစုံတွေနဲ့ အရေပြားကို အလှဆင်ကြလဲ ခလေးဘ၀တုန်းက မေမေ လိမ်းခြယ်ပေးခဲ့ဖူးတဲ့ ပါးနှစ်ဖက်က သနပ်ခ...
နင့်ကို ငါ ချစ်တယ် ဒါပေမယ့်..... နင်က ငါ့ရဲ့ အချစ်ဆုံးလူတစ်ယောက်တော့ မဟုတ်ဘူး။ နင့်ကို ငါ မုန်းတယ် ဒါပေမယ့်..... နင်က ငါ့ရဲ့ အမုန်းဆ...
ပိတောက်နှိုးတဲ့ ဖက်ဆွတ်မိုးနဲ့အတူ အေးမြတဲ့ လေပြေချို က လှစ်ကနဲ့တိုးဝင်လာ ဟိုး... ခြံထောင့် ပိတောက်ပင်ဆီမှ သင်းပျံ့တဲ့ ပန်းပိတောက်ရနံ့...
ဗိုက်တာမင်ဆိုတာကို လွန်ခဲ့သောနှစ်ပေါင်းမြောက်များစွာကတည်းက သိရှိခဲ့ကြပါတယ်။ ဗိုက်တာမင်များသည် သဘာဝအလျှောက် ကမ္ဘာပေါ်တွင် လူသားများမပေါ်ပေါ...
တစ်ယောက်ကို တစ်ယောက် အပြစ်မြင် အပြစ်မတင်ပဲ နားလည်အောင် ပြောပြတက်ရမယ်။ တစ်ယောက်ရဲ့အားနည်းချက်ကို တစ်ယောက်က သိနားလည် ခွင့်လွှတ်တက်ရမယ်။ အားငယ...
*ဒီနေရာလေးမှာပဲ အမြဲတမ်း ရှိနေမယ်လေ*
♥♥♥♥ အလွမ်းမြို့လေး ♥♥♥♥
ပန်းတိုင်ဆီသို့ ( ၅ )
♫♪♫★ နေဇော်လင်း1-1 ★ ♫♪♫
Zing Photos by Crazyprofile.com
Lay Pyay Cho. Awesome Inc. theme. Theme images by RBFried. Powered by Blogger.